Miyaad ka walwalsan in ay xisaabiso si ay u cadaadin aad MP4 video? A MP4 video weyn had iyo jeer sababa dhibaato. Waxay qaadataa meel badan oo aad disk adag, taas oo horseedaysa si ay u yareeyaan xawaaraha of your computer. Waxa aan la badbaadiyey guul leh kartaa madadaalo on go ah ay sabab u tahay jidhkaaga oo guri. Waxaa xitaa kaabadaha aad u geliyaan internet-ka ama u soo dir saaxiibadeen u qaybsiga. Si kasta oo ay u cadaadin?
Dhab ahaantii. Iyada oo ah hawadda MP4 fudud iyo awood badan sida Wondershare Video Converter , in aad awood u cadaadin videos MP4 waqti tayo sameecadda ah oo waafaqsan sare tahay (riixo Dufcaddii taageeray).
Hawadda MP4 Best for Windows / Mac (Yosemite ka mid ah)
Si fudud cadaadisaa MP4 video aan khasaaro tayada wax.
Habee goobaha video sida bitrate, xallinta heerka, jir iyo in ka sii badan.
Dalagyada, darsamaan, isku shaandheyn iyo kala jabeen video gudahood barnaamijka.
1. MP4 Load videos in hawadda MP4 this
Guji "Add Files" icon inay ku shuban file caga aad ka miiska iyo fayl. Waxaad dajiyaan karaa in ka badan hal file, kaliya wax miiran "Ctrl" marka la dooranayo files MP4 ah. Ama kaliya jiidi oo hoos u dhan videos MP4 aad u baahan tahay in cadaadin galay barnaamijkan.
2. Habee goob video in la yareeyo xajmiga video
Guji "Qaabka Output" doorasho dhinaca midig ee suuqa hoose in ay doortaan MP4 sida qaab wax soo saarka. Ka dibna riix "Settings" badhanka si ay ula qabsadaan koobin ee video iyo maqal ah labadaba. Halkan, waxaad si fudud u dooran kartaa "Tirada yar" si loo yareeyo xajmiga file aad si weyn. Haddii kale, adigu qabsato koobin by:
3. riixo Start MP4
Marka goobaha oo dhan ku qancay, ku dhacay "Beddelaan" button oo ha barnaamijkan is ogow of riixo MP4. Hadda waxaad ku raaxaysan karaan MP4 video Tifaftirayaasha wakhti kasta, meel kasta!
Video tutorial: Sida loo cadaadin MP4 video files
> Resource > MP4 > Sidee ku cadaadisaa MP4 (MPEG / Mpg) Video in Windows & Mac